Maxay daarantahay Qaylodhaanta ka soo yeedhaysa Fannaaniinta London ? | Berberanews.com
Home Fanka iyo Sugaanta Maxay daarantahay Qaylodhaanta ka soo yeedhaysa Fannaaniinta London ?
Maxay daarantahay Qaylodhaanta ka soo yeedhaysa Fannaaniinta London ?
London(Berberanews)-Fannaaniin badan ku nool magaalada London, ayaa maalmahan cabasho ka muujiyay mid ka mid ah shaqaalaha Tvga Universal oo magaciisa la yidhaahdo Abuukar Mahdi, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu dhac Iyo boob ula badheedhay hantidoodii maskaxeed ee ay sameeyeen, jileen ama u soo bandhigeen bulshada.
Waxay Fannaaniintu sheegeen in Abukar Mahdi iyo gabadh ay walaalo yihiin samayteen Youtubeyo ay soo geliyaan muuqaallada iyaga laga duubo, oo dhaqaale badani ka soo galo, balse uu Abukar Mahdi isku koobay xaqii ay ku lahaayeen oo uu duudsiyay.
Fannaanad caana oo dacwad ku oogaysa Universal Tv
Fannaanada Faadumiina maxay ku andacoonaysaa? “Berrito hadaan waxayga idinka waayo ama wejigayga iiga bixin weydaan meel xun bay tegi, adiga iyo walaalkaa Abuukar Mahdi wixii aan duubay oo dhan iiga bixiya youtubekiina Abukar Mahdi iyo Jamiila Mahdi, hadaad iga bixin weydaan waxaad iga dheeftiin aan aragno”
Halkan hoose kaga bogo muuqaalka Fannaanada Faadumiina.
Fannaada Laki Xaaji Wacays oo iyana arrintan ka hadashay ayaa tidhi, “saddex sanno ka hor waa laygu gardarooday, oo waxaa igu gardatooday Universal Tv, oo ui foodsaare u yahay wiilkan kamarada duuba ee hada lagu wada dheganyahay (Abukar Mahdi), shalay wixii aan ka haddlayay maanta ayay taaganyihiin, maanta dadkoo dhami miyay qaldanyihiin?.”
Halkan hoose kaga bogo muuqaalka Fannaanada Laki Xaaji Wacays.
Abwaan Faarax Murtiile oo isna muuqaal Video ah iska soo duubay, ayaa sheegay in la taaganyahay wakhtigii lala xisaabtami lahaa Abukar Mahdi.
“Waxaa la yidhi sida walaalaha wax isu siiya, sida cadowgana u xisaabtama. Filimkii aan keligay lahaa ee aan maskaxdayda ka soo gororiyay magaciisa ‘Kala Haab’ baa la yidhaahdaa, youtubekaaguu ku jirà, ma lacag baan ka helay anigu, filimadaasna waxaa loogu tallogalay inay maraan Universal Tv, laakiin youtube shuqul kumaynaan lahayn.”
“Habluhu way ina dhaleen, waynu la dhalanay, way inoo dhaxeen, in idaacadaha layska maago oo layska soo caayo oo layska aflagaadeeyo maxaa keenay?. Walaal waxaad tidhi riwaayaddii Kaaf iyo Kala dheeri cawkaa lahaa, dee carruurtii Cawke wax ma ka siisay ileen lacag baa kaasoo gashee? Taana waanu soo ogaan doonaa!!.”
Halka ka dheeho muuqaalka Abwaan Murtiile oo dhammaystiran.
Riwaayada qooto qooto
Previous articleXogta: Xaruntii Sirdoonka KBG oo gacanta Turkiga ku dhacday
Next articleAntoine Griezmann oo xidhiidhka u jaray Huawei cadaadiska Muslumiinta China dartood